राजपा र समाजवादी पार्टीको चुनावी गठबन्धन ! सम्भावना कति ?
राजपा र समाजवादी पार्टीको चुनावी गठबन्धन ! सम्भावना कति ? ‘पहिला कांग्रेले निर्णय गरोस, उनीहरुको निर्णय आएपछि मात्र समाजवादीसँग एकता गरेर अगाडि बढ्ने’
विनय ज्याेती बिहिवार, कार्तिक ७, २०७६, १५:१९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । पार्टी एकताकोे अन्योलमा गाँजिएको दुई राष्ट्रिय दल समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)ले चुनावी अभियानको थालनी गरेका छन् । समाजवादी पार्टीले छुट्टै चुनावी कार्यको सुरुवात गर्दै डा. शिवजी यादवको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय निर्वाचन समिति तयार गरेको छ । गत असोज २६ मा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । उता निर्वाचन समितिनै नबनाएको राजपाले अध्यक्ष मण्डलको बैठक बसेर उम्मेद्वार निक्र्यौल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी राज्यको तेस्रो र चौथो राजनीतिक पार्टीले आ–आफ्नो चुनावी अभियानलाई अगाडि बढाएका छन् ।
असोज पहिलो हप्तामा बसेको समाजवादी पार्टी बैठकले एकता(संघिय समाजवादी–नयाँ शक्ति) भएपछि निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गरे सँगै असोज ८ गते आयोगमा उपनिर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता ग‍र्‍यो । राजपाले पनि उत्तिकै महत्वका साथ निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दल दर्ता ग‍र्‍यो ।
तर समाजवादीले कात्र्तिक २७ मा मात्र उम्मेद्वारको नामावली निकाल्ने भएको छ । उसले २७ गते संघिय परिषद्को बैठक, २८ र २० गते केन्द्रिय समितिको बैठक बसेर उम्मेद्वार टुंगो लगाउने छ । यसबाट क्रमस स्थानीय र प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभाको टिकट कसलाई दिने भनेर तय गरिनेछ ।
यता राजपाका महासचिव केशव झाले भने नेपाली कांग्रससँग पनि गठबन्धनको तयारी रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘समाजवादीसँग एकताको कुरा त होलानै सँगसँगै कांग्रेससँग पनि एकताको कुरा बढ्नसक्छ । पहिला कांग्रेले निर्णय गरोस उनीहरुको निर्णय आएपछि मात्र समाजवादीसँग एकता गरेर अगाडि बढ्ने कुरा छ ।’
मंसिर १४मा हुने उपनिवार्चनमा ३६ जिल्लाका विभिन्न ५० पदमा उम्मेद्वार विजयी बन्ने छन् । गएको फाल्गुन २७ गते ताप्लेजुङमा प्लेन दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका तत्कालिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको मृत्यु भएपछि प्रतिनिधि सभाको एक सिट खाली छ । त्यस्तै प्रदेशसभा तीन सिट रिक्त रहेका छन् । रिक्त रहेका सिटमा दाङ भक्तपुर र बाग्लुङका रहेका छन् ।
दाङ–३(ख)को उत्तमकुमार वलीको फागुन १० मा निधन भएपछि सो क्षेत्र प्रदेश प्रतिनिधिविहीन बनेको हो । त्यसैगरि भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ (क) को प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण लामिछानेको वि. सं. २०७५ साल बैसाख ३१ गने निधन भएपछि सो क्षेत्र पनि प्रतिनिधिको आम चनुाव पर्खिरहेको छ । दाङ र भक्तपुर दुवै क्षेत्रमा नेकपाले जितेका थिए ।
रित्त रहेको तेस्रो प्रदेशसभा जिल्ला हो बाग्लुङ । त्यहाँ पनि टेकबहादुर घर्तिको निधनपछि प्रदेश प्रतिनिधि आवश्यक रहेको छ ।
त्यस्तै, धरान उपमहानगरको उपाध्यक्षको पद लगायत कूल ५० स्थानका लागि मतदान हुने छ जसमा गाउँपालिका अध्यक्ष ३, उपाध्यक्ष १ र वडा अध्यक्ष ४१ समेत पर्दछन् । यी सबै ठाउँमा उम्मेद्वार उठाएर आशातित नतिजा ल्याउन समाजवादी पार्टी र राजपा कम्मर कसेर लागिपरेका छन् ।
राजपाले उपनिर्वाचनका बारेमा थप छलफल गर्न भोली(शुक्रबार) केन्द्रिय कमिटी बैठक बस्ने तयारी गरेको छ । जिल्ला भ्रमणका क्रममा रहेका एक अध्यक्ष राजकिशोर यादव अहिले सिरहामा छन् । उनी पार्टी गठबन्धन गरेर जाने कुरामा भोलीको निर्णय नै अन्तिम हुने बताउँछन् ।
‘जिल्लामा पनि अध्यक्ष मण्डलको बैठक बस्ने क्रम जारी छ, जिल्लाबाट बढीमा तीन जानको नाम सिफारिस गरिन्छ । केन्द्रम ती ३ मध्ये एक जनालाई सर्वसम्मती गर्ने प्रस्ताव गरिन्छ,’ उनले चुनावी कार्यवारे भने, ‘जहाँ जहाँ हाम्रो संगठन बलियो छ त्यहाँ हामी आफैं उम्मेद्वार उठाउने, जहाँ संगठन मिलेर जानुपर्ने स्थिती छ त्यहाँ गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
तर केन्द्रमा रहेका नेताहरुको बुझाइ भने जिल्लामा काम नै भएको छैन भन्ने छ । ‘पार्टी एकताको समयबाटै सबै तहमा हाइरार्कि बन्न सकेको छैन् । विभिन्न विवादका बाबजुद उम्मेद्वार छन्न भने निकै सकस छ,’ राजपाका उपमहासचिव संजय यादव भन्छन,‘जिल्लामा केही पनि काम भएको छैन् ।’
राजपालका आम नेताको बुझाई पनि आफ्नो राम्रो पकड भएको ठाउँमा आफैँ उठ्ने र समाजवादीको पकड भएको ठाउँमा एकता गरेर जाने भन्ने बुझाइ छ ।
उनले यादवले गठबन्धनबारे निर्णय भइनसकेको र प्रयासमात्र भएको बताए । राजपा गठबन्धनको पक्षमा सकारात्मक रहेको बुझाइ नेतागणमा छ । राजपाका नेताहरु समाजवादी पार्टीबाट अनुकुल प्रस्ताव आएमा सहकार्य गरेर जाने बताउँछन । चुनाव आउन पाँचहप्ता मात्र बाँकी भएकाले यसबारे कार्यक्रम सुरुहुने समय भैसकेको छ । त्यसैअनुरुप राजपा केन्द्रिय समितिको बैठकले असोज १३ गतेभित्र सबैको नाम केन्द्रमा पठाइसक्न अनुरोध गरेको छ । अध्यक्ष यादवले १३ गतेनै जिल्लाबाट नाम पठाउने तयारी रहेको बताए ।
यो निर्वाचन मुख्य नभएको साथै सरकारको कामको प्रतिफलका रुपमा हेरिनुपर्ने भएका कारणले पहिलेको चुनावमाजस्तो ठूलो गतिविधि नहुने राजपाको ठहर छ । समाजवादी र राजपाको सबै जिल्लामा बलियो पकडल नभएका कारण पनि उनीहरुलाई चुनावमा मन लगाएर होमिन मन छैन् । आफ्नो पकड भएका ठाउँमा भने दह्रै गरि लाग्ने राजपाका नेताको मनयाय बुझिन्छ । यसैकारण दुवै पार्टीलाई कुन ठाउँमा उम्मेद्वार उठाउने र कुन ठाउँमा नउठाउने भन्ने सकस अगाडि छ ।
राजपाका नेताहरु सबैमा समाजवादी पार्टीसँग चुनावी एकता गरेर जाने बारेमा निकै समस्या रहेको बुझाइ छ । ६ जना अध्यक्ष रहेको पार्टीमा आ–आफ्नै प्यानलका मानिस उठाउन अध्यक्ष्यहरु लागिपरेका छन् भने अर्कातिर समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गरेमा सबैलाई मिलाएर अगाडि लैजानसक्ने पार्टी अध्यक्षको पनि खाँचो छ । चक्रिय प्रणालीबाट चलेको पार्टीको सबै अध्यक्ष आफ्नो निर्णय चलोस भन्ने चाहन्छन् । उपमहासचिव संजय यादवको भनाइले राजपाको आन्तरिक किचलो रहेको उदृत गरेको छ ।
यता समाजवादी पार्टीका निर्वाचन समितिका संयोजक डा. शिवजी यादव भन्छन्, ‘पहीले पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा गठबन्धन गरेकै हो । अहिले मोटामोटी रुपमा पार्टीले निर्णय नै त गरिसकेको छैन । तर गठबन्धनको प्रसस्त सम्भावनाहरु छन् । केन्द्रिय समितिका सबै सदस्यको मनोभावना पनि एकता गरेरै जाने भन्ने छ ।’
प्रतिनिधि सभा कास्की निर्वाचनमा समाजवादी पार्टीले आफ्नै उम्मेद्वार उठाउने योजना वनाएको छ । कांग्रेस र नेकपाको महाभिडन्तका रुपमा लिएको समाजवादीले कास्कीमा जित निकाल्न सक्ने आशा कमै राखेको छ । समाजवादी पार्टीले चुनावी मान्यता अनुरुप निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ भन्ने शिद्धान्तलाई मात्र अंगिकार गर्न खोजेको जस्तो मात्र देखिएको छ ।
तर, समाजवादी पार्टीले राजपाको नेतृत्वलाई हेर्ने शैली भने विल्कुलै फरक छ । १३ गतेभित्रमा उम्मेद्वारको नाम पठाइसक्नु भन्ने राजपाको सर्कुलर पनि समाजवादीले देखावटीका रुपमा बुझेको छ ।
भोली बस्ने भनिएको राजपाको बैठकले समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने टुंगो लगाएमा त्यसको अनुमोदन समाजवादीले गर्ने विश्वास निर्वाचन संयोजक यादवले लिएका छन् ।
‘पढ्न दिने, सर्टिफिकेट दिने तर काम गर्न नदिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ’ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचबिसी)ले एमएस्सी र बिएस्सी माइक्रोबायोलोजीस्टलाई लाईसेन्स नदिएको विषयमा आन्दोलन चलिरहेको छ । मेडिकल, ल्याब, खाद्य तथा गुण नियन्त्रणका साथै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनसरोकारका क्षेत्रमा अत्यावश्यक माइक्रोबायोलोजिस्टहरुको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन चलेको हो । शुक्रवार, भदौ ६, २०७६, ००:४९:००